Ardayda Xudur oo dalbaday in laga caawiyo qalabka looga hortago Cudurka Covid-19 | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Ardayda Xudur oo dalbaday in laga caawiyo qalabka looga hortago Cudurka Covid-19
Goobaha Waxbarashada waxay ka mid ah yihiin goobaha ugu sahlan ee Cudurka safmarka ah ee Corono Virus uu ku faafi karo, iyadoo taas laga duulayo ayaa ardayda wax ka barata Iskuulada ku yaalo degmada Xudur ee gobolka Bakool waxaa loo sameeyay wacyigelin ku saabsan covid-19.
Fasalada qaar ee iskuulada ayaa la soo sheegayaa in ay dhigtaan in ka badan 70-arday, mana lahan Af-saabka (Af-xir) iyo Agabyada kale ee lagaga hortago Cudurka dilaaga ah ee Covid-19 oo dunida hadda si weyn ugu soo laba kacleeyay.
Macalin Xuseen Cali Abdi ayaa ardayda wacyi gelinaya ka hor intaan la gelin Fasalada.
“ Banaanka imow gacmaha iska nadiifi ka dibna Fasalka ku noqo,” ayuu ku yiri Ardayda Macalin Xuseen Cali Cabdi.
Macalinka ayaa ka hadlay baahiyaha ay u qabaan in lagu caawiyo qalabka loo adeegsado ka hortaga Cudurka Corono Virus, wuxuuna ardayda ku diira geliyay in markasta gacmaha ay iska dhaqaan si ay kaga nabad galaan cudurkan dilaaga ah.
Coronavirus ayaa ku baahay inta badan caalamka, sida ay dhaqaatiirta caafimaad ay sheegeen, Coronavirus wuxuu ku dhacaa sambabbada. Calaamadaha waxay ku bilowdaan qandho, waxaa soo xiga qufac qallalan, kaas oo horseeda dhibaato dhanka neefsashada ah
Ardayda Xudur oo dalbaday in laga caawiyo qalabka looga hortago Cudurka Covid-19 was last modified: March 1st, 2021 by Admin
Midowga Musharaxiinta oo Afar qodob ka soo saaray kulan ay maanta yeesheen